Ciidamo Soomaali ah oo ka dagaallamay Itoobiya oo lasoo bandhigay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo Soomaali ah oo ka dagaallamay Itoobiya oo lasoo bandhigay
Inkastko dowladda Soomaaliya ay beenisay in ay jiraan ciidamo Soomaali ah oo ka dagaallamay Itoobiya, haddana waxaa soo soo baxaya warar sheegaya in ay jiraan ciidamo Soomaali ah oo halkaa ka dagaallamay.
Warbixin lagu daabacay Baaraha Khaaska ee Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha soo saartay ayaa lagu sheegay in ciiddan Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eratariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya.
Warbixintan ayaa lagu xusay in Baaraha Khaaska ee QM soo gaareen warbixin iyo warar sheegaya in ciiddanka Soomaalida ee Tababarka Milliteri ujoogay halkaasi laga qaaday Xeradii Tababarka, lana geeyey Jiidda hore ee Dagaalka ee Gobalka Tigrayga, waxayna Ciiddanka Soomaalida oo ay wehliyeen Milliteriga Eritrea ka gudbeen Xuduudka dalka Itoobiya.
Guddiga QM ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha waxaa kale oo uu warbixintiisa ku xusay inuu hayo warar muujinaya inay ciidamadii ka qeyb qaatay dagaalkaasi ee Soomaalida ahaa xilli xaadirkan ku sugan yihiin daafaha magaalladda Aksun ee Gobalka Tigrayga ee Waqooyiga dalkaasi Itoobiya.
Dowladda Soomaaliya waxay horey u beenisay in Ciiddanka Tababarka loogu qaaday Eratariya ay ka qeyb qaateen dagaalka ka socda Gobalka Tigreega, iyadoo Guddiga Arrimaha Dibedda iyo Difaaca ee Golaha Shacabka BJFS ay ka codsadeen Madaxweynaha Soomaaliya inuu faahfaahin ka bixiyo Ciiddanka tababarka loogu qaaday Eratariya.